लकडाउनमा अनिन्द्राले सतायो ! कसरी मुक्ति पाउने ? - Subhay Postलकडाउनमा अनिन्द्राले सतायो ! कसरी मुक्ति पाउने ? - Subhay Post
लकडाउनमा अनिन्द्राले सतायो ! कसरी मुक्ति पाउने ?
सुभाय् संवाददाताJune 2, 2020 मा प्रकाशित (२ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ६ मिनेट
गोपाल ढकाल, मनोविद। लकडाउन शुरुभएपछि निदाउन गार्‍हो हुने , निदाइ हाले पनि बिच बिचमा निन्द्रा टुटिरहने , बिहान चाडै निन्द्रा खुल्ने र फेरी निदाउन कठिन हुने जस्ता सिकायत लिएर धैरे ब्यक्तिहरुले मनोपरामर्शका लागि फोन गर्न थालेका छ्न् ! बन्दाबन्दीपछिको समयमा अनिन्द्राको समस्या बढेर गएको देखिन्छ ।कोरोनाको संकट तथा बन्दा बन्दिले मानिसको जिवनशैलीमा परिबर्तन आएकोछ । ब्यक्तिको दैनिक क्रियाकलाप, खानपान, यौन जिवन, निन्द्रा जस्ता कुरामा पनि उतारचढाव ल्याएकोछ। जीवनकालागि खानापान जति आवश्यक हुन्छ, उत्तिनै निन्द्राको पनि आबस्यकता पर्दछ।
निन्द्रा पनि मानिसलाई नभई नहुने अति आवश्यकता मध्येको एक हो । शारिरिक तथा मानसिक रुपमा स्बास्थ्य रहन प्रयाप्त निन्दाको जरुरत पर्दछ। निदाएको अवस्थामा मानव शरीरका सबै प्रणालीहरूको नवीकरण हुन्छ। यसले हाम्रो शरीर र मस्तिष्कलाई विश्राम मिल्छ।
अनिन्द्राको कारण पत्ता लगाई सोहि अनुसारको समाधान खोज्नुपर्छ । निन्द्रा लागेन भनेर आफुखुशी औषधि खानु भने हुदैन ।बन्दाबन्दी पछि अनिन्द्राको समस्या देखिनुको कारण के के हुन सक्छन् ?